トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Endri-javatra - jereo ny alalan 'ny lalana mankany amin'ny onjan-ROM matetika ny fiainana
Pachinko milina ny ROM dia, mafy vanim-potoana, matetika fotoana, dia nozaraina ho fe-potoana slump. Raha oharina amin'ny vanim-potoana iray sy tezitra mafy fotoana, dia mety Normal fiainana ny hilaza sarotra. Endri-javatra manokana, toy ny mahery sy ny vanim-potoana tezitra-fiainana, sarotra ny hamantarana dia satria ny fiainana ara-dal?na. Ao
, dia ho afa-tsy ohatra inona ny zavatra mitranga ao amin'ny Rom ny endri-javatra amin'ny fiainana ara-dal?na, fa mbola mampiditra.
ao amin'ny vanim-potoana ara-dal?na, na matetika fitokonana, izay mampiankin-doha na lasa lalina dia tsy ho hita betsaka. Na hoe, tsy ny zava-misy izay tsy io mihitsy ny hira, ny zavatra ihany no milaza ny lehibe dia tsy doha. Eo amin'ny famokarana, sns, dia tonga koa ny famokarana ihany koa ny avy ao ny azy.
Na izany aza, ny vokany tianao ny saina indrindra dia ny famokarana sy ny tonga, toy ny dia voalaza fa faran'izay mafana.
nivoaka tamin'ny isan-karazany takatry dia foana, tsy misy tsy azo inoana kokoa dia mafy avy Atsu famokarana sy hahatratra. Koa, ny hafainganam-pandeha rotational hatramin'ny namely, lasa aloha sy aorian'ny 300 eo ho eo fihodinan'ny, dia subtracting ny jackpot, dia misy ihany koa ny zava-misy fa ny iray-eny. Na dia ny fihoaram--miverina in
ny fampihenana, na tsy hanohy, fiovaovana mety mitranga ihany koa ianao fa izay tsy mikatona mora foana. Toy izany ny fanjakana no ho endri-javatra ny ara-dal?na ny fiainana ny ROM. Raha niresaka an'ohatra
, tsy mandray mihoatra noho ny fampiasam-bola ny volamena, dia ny fanjakana izay tsy dia mahazo vola. Raha vao nisy ny mifanohitra amin'izany, ao amin'ny vanim-potoana ara-dal?na, fa tsy mety koa ny zava-misy fa mandritra ny fijanonana dia saro-takarina.
na dia misy famantarana ny fiainana ara-dal?na toy izany, satria mety very hividy koa, dia tsy maintsy mitandrina. Avy eo, ao amin'ny antontan-kevitra kisary eo amin'ny raharaha toy izany ny fiainana ara-dal?na, fantatrao tsara ka jereo tsipika kisary.
andalana afovoany onja io dia tsy mijanona manaraka ny tsipika tabilao dia ny hoe tsy mahadomelina. Ary avy, eo ho eo, dia porofo fa tsy namerina na avy. Tahaka izany ny angon-drakitra misy mikoriana, heveriko fa dia mety izay niditra tao amin'ny fe-potoana ara-dal?na dia mety ho tapa-kevitra ny ho avo Ianao.
Normal fiainana mampiankin-doha ihany koa fa mora ny milalao satria kely, dia mahazo ny fahafahana hiditra ny vanim-potoana slump afaka izany. Fa na dia misy famantarana ny ara-dal?na ny fiainana, 300 Ary raha ny fihodinan'ny kokoa mampiankin-doha efa nanaraka na, amin'ny tranga ny famokarana sy ny takatry intsony mandroso, toy izany ka mety izay niditra ny
tezitra fe-potoana, table hetsika na dia nieritreritra ny hevitrao zavatra tsara hatao. Ny mifanohitra amin'izany, fa misy ihany koa ny mety hifindra monina ho any amin'ny vanim-potoana mahery, dia vanim-potoana matetika. Arakaraka ny toe-javatra ny teo anoloan'ny onjam-ara-dal?na ny fiainana, tsy fantatro na eo na ny sampana.
from try namely Na ahoana na ahoana, satria mihevitra fa ny toe-javatra izay ny toe-javatra mety hotsaraina, dia lasa mikoriana tsy handratra miezaka namely. Raha Minukere ara-dal?na tsara ny fiainana, misy ihany koa ny tombontsoa izay mety hamaky amin'ny hoavy ny pototry ny fikorianan'ny.
na ho Na izany rehetra taitaitra rehefa tsy misy il?na azy na hevitra, na lasa tsy ilaina ny mieritreritra fa Atsu angisy, Rehefa dinihina tokoa, satria matetika no natao tamin'ny fanapariahana dia kamo fa ny payout tsy ho angidimby tsy misy ihany koa ny mitombo, tsy dia tamin'ny sputter sy ny closeout ary, tsy maintsy mitandrina, satria tsy hisy fotoana mba manao baolina avy ao amin'ny latabatra hafa.